I-Rosa - Indlu yamaplanga yale mihla ye-Viking, ephucukileyo, efihlakeleyo, engaphandle kwegridi - I-Airbnb
I-Rosa - Indlu yamaplanga yale mihla ye-Viking, ephucukileyo, efihlakeleyo, engaphandle kwegridi
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMark
I-Glamping Ephuculiweyo kule ndawo yenzelwe ukuhlawula intente ngaphakathi kwiViking, indlu yethu yamaplanga evulekileyo ithetha ukuba indalo ayikho kude kakhulu. Indlu yamaplanga, iRosa, ikwindawo esecaleni ngeenyawo ezimbalwa ukusuka elunxwemeni. Ukuba ngaphandle kwegridi ngokupheleleyo sinegumbi lokuphumla elitofotofo elinethoyilethi yomgquba, i-heater yomoya ophoqelekileyo ene-thermostat., ifriji yeenyawo eziyi-4.5 ezinefriji, i-Weber Grill, isinki yangaphandle. Ixhaswa ziipaneli ze-solar kunye nebhetri, ayikho i-enviro footprint.
Ukusuka esofeni ungabona ichibi kumacala ayi-3 endlu yamaplanga njengoko kukho iifestile ezinkulu ezingaphezu kweziyi-10. Iindonga zeBaltic Birch ezisuka eRashiya ziyi-20 feet ukuphakama Ifreyim ukuya kwindawo evulekileyo. Ibhedi enkulu emfumamfuma ikumgangatho ophambili.
Indawo yokupaka ikwindlela esuka kwindlu yamaplanga ekugqibeleni kwendawo yokungena imoto ibe imalunga ne-400 feet xa uhamba ngeenyawo ngaphaya komgqomo uze ufike kwindlu yakho yamaplanga. Sinenqwelo eza kunceda ukuphatha impahla yakho ukuba kuyimfuneko.
Njengendawo ephangaleleyo yokudlala i-Glamping, indlu yamaplanga ayinawo amanzi aphumayo, okanye ithobhi elitshixekayo (sinendlu yangasese enomgquba omkhulu, sinikezela ngamanzi owadingayo ukwenzela ikofu, ukuhlamba, ukuhlamba phandle kwiigaloni eziyi-5 zamanzi. Sikwabonelela ngazo zonke izixhobo zombane. NgoJulayi 2021 siza kuba neshawa ephandle enesepha efudumeleyo echibini. Siza kuyisusa yonke inkunkuma ngendlela engayonakalisiyo indalo.
Ukusuka kwi-sofa unokubona ichibi ukusuka kumacala ama-3 ekhabhini njengoko kukho iifestile ezinkulu ezingaphezu kwe-10. Iindonga zeBaltic Birch ezivela eRashiya zihamba ngeenyawo ezingama-20 ukuphakama A isakhelo ukuya kwincopho evulekileyo. Ibhedi yokumkanikazi epholileyo kumgangatho ophambili
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Riverton